Home Wararka Kenya oo shaacisay in ciidankeeda ku nagaan doono dalka Soomaaliya
Kenya oo shaacisay in ciidankeeda ku nagaan doono dalka Soomaaliya
Dowlada Kenya ayaa shaacisay in ciidankeeda ku nagaan doono dalka Soomaaliya ilaa laga gaarayo ujeedadii loo geeyay dalkaas. Taliyaha guud ee ciidamada difaaca Kenya gen. Robert Kibochi, ayaa sheegay in ciidamada Kenya aysan Soomaaliya ka bixi doonin wakhtiga dhow. Taliyaha oo wareysi gaar ah siiyay telefishinka laga leeyahay waddanka Kenya ee KBC, ayaa sheegay in Soomaaliya ay xasilooni-darro ka jirto, sidaas darteedna ciidamada Kenya aysan ka bixin doonin.
Dhanka kale, Gen. Robert Kibochi ayaa tilmaamay in ciidamada Kenya ay sii caawin doonaan kuwa Soomaaliya, inta laga xaqiijinayo nabadda iyo xasiloonida dalka. Taliye Kibochi ayaa xusay in ciidamada Soomaaliya aysan weli hanan karin amniga guud ee dalka, islamarkaana aysan ka maarmi karin taageerada ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM.
Previous articleIngiriis & Kenya oo kala saxiixday Heshiis cusub oo ka dhan ah khatarta Al-Shabaab
Next articleFarmaajo oo dagaal ku qaaday Rugta Ganacsiga iyo hogaankeeda?
MW Farmaajo oo colaad ka dhex abaabulayo beesha Ogadeen ee degan...
Dh/mareeb: Sidee loola wareega ciidan degaankooda jooga, hubna haysta?